Imibuzo evame ukubuzwa - Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd.
A: Uma ikhasimende lidinga ukwenza isikhunta esisha, yebo badinga ukukhokha imali yesikhunta kuqala, kuzoba ngama- $ 2300- $ 2800. Futhi sizobuyisa le mali lapho ikhasimende lifaka ama-oda amane esitsha se-20GP.
I-Q11: Udlule kusiphi isitifiketi?
I-Q12: Udlule kusiphi isitifiketi?
Q13: Yimaphi amakhasimende osuwadlulile ukuhlolwa kwemboni?
I-Q14: Lunjani uhlelo lwakho lokuthenga?
Q15: Lithini izinga labahlinzeki benkampani yakho?
Q16: isikhathi esingakanani usebenza isikhunta sakho ngokujwayelekile? Ungayigcina kanjani nsuku zonke? Yini amandla esethi ngayinye yokufa?
Q17: Iyini inqubo yakho yokukhiqiza?
I-Q18: Singakanani isikhathi esivamile sokulethwa kwemikhiqizo yakho?
Q19: Ingabe unayo ubuncane be-oda ubuncane? Uma kunjalo, lithini inani elincane le-oda?
I-Q20: Uyini umthamo wakho ophelele?
Q21: Inkulu kangakanani inkampani yakho? Lithini inani lokukhipha lonyaka?
Q22: Imiphi imishini yokuhlola onayo?
Q23: Iyini inqubo yakho yekhwalithi?
Q24: Uyini umkhiqizo wakho womkhiqizo? Kwazuzwa kanjani?
Q25: isikhathi eside kangakanani isikhathi sokusebenza kwemikhiqizo ye-WPC?
Q26: Yiliphi igama lokukhokha ozolamukela?
Q27: Ukuqhathanisa nezinkuni, yini inzuzo ngemikhiqizo ye-WPC?
Q28: Ingabe imikhiqizo ye-WPC idinga ukupendwa? Yimuphi umbala ongamnika wona?
WPC decking phansi, WPC decking esiyinhlanganisela, ngokhuni plastic decking esiyinhlanganisela, WPC decking ongaphandle, WPC phansi, Ukuhlobisa i-WPC yangaphandle,